नयाँ आउन लागेको द कपिल शर्मा शोमा सुमोना हुन्छिन् की हुँदिनन् ? अर्चना पुरन सिंहले खुलाइन् रहस्य, नयाँ सदस्य को थपिए ? « Gaunbeshi
नयाँ आउन लागेको द कपिल शर्मा शोमा सुमोना हुन्छिन् की हुँदिनन् ? अर्चना पुरन सिंहले खुलाइन् रहस्य, नयाँ सदस्य को थपिए ?
एजेन्सी । निकै चर्चित द कपिल शर्मा शो को छायांकन सुरु भएको छ। अजय देवगन, नोरा फतेही र शरद केलकर पहिलो दिन अतिथि बनेर आएका थिए। शोको जज अर्चना पूरन सिंहले पहिलो दिनको छायाँकन कस्तो रहेको थियो भन्ने कुराको जानकारी दिएकी छन् ।
शोको न्यायाधीश अर्चना पूरन सिंहले आज तकलाई भनिन्, ‘पहिलो दिनको छायांकनको अनुभव निकै राम्रो थियो । सम्पूर्ण टीम उत्साहमा समय भन्दा अगाडी पुग्यो। म बिहान ७ बजे नै सेटमा पुगें। म साँझ सात बजे घर फर्कें। म धेरै थकित छु तर अनुभव भयानक थियो।
अर्चना भन्छिन्, ‘अजय देवगन, नोरा फतेही र शरद केलकर पहिलो दिन अतिथि बनेर आएका थिए। छायांकन धेरै राम्रो संग शुरू भएको छ र हामी पूर्ण उत्साह संग फर्कने छौं।’
केहि समय को लागी, शो मा सुमोना को अनुपस्थिति को खबर मिडियाले हेडलाइन बनाएको थियो। सुमोना प्रोमो को समयमा त्यहाँ थिइनन्, त्यसैले यो अनुमान लगाइएको थियो कि केही फेरवदल गरिएका कारण सुमोना शो बाट बाहिरिइन्। यस्तो अवस्थामा अर्चना सुमोना बिना छायांकनको अनुभव को बारे मा भन्छिन्, ुयदि तपाइँ सोमोना शो मा हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ, तब तपाइँ चाँडै एक आश्चर्य प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। शो मा सुमोना छन् तर उनको अवतार धेरै फरक हुनेछ, तर हामी एउटै प्यारी सुमोना हुनेछ।
शो को नयाँ सदस्य को अतिरिक्त, अर्चना भन्छिन्, ‘वर्तमान मा, केवल सुदेश लाहिरी को प्रवेश शो मा भएको छ। बाँकी टोली पुरानो छ। तपाइँ अब शो मा नयाँपन देख्नुहुनेछ। शो मा सेट नयाँ छ। धेरै प्रयोग गरिएको छैन किनकि एउटा चीज जुन बर्षौंदेखि मानिसहरुको मुटुमा रहेको छ, यदि यो धेरै परिवर्तन गरियो भने मन नपर्न सक्छ । धेरै परिवर्तन ल्याउनु पनि जायज छैन। यसमा तपाइँ कपिल शर्माको परिवार विस्तार देख्नुहुनेछ। तपाइँ सेट मा एक सानो नयाँ पृष्ठभूमि देख्नुहुनेछ।’